222 tapitrisa euros: mpilalao lafo vidy indrindra i Neymar da Silva Santos | NewsMada
222 tapitrisa euros: mpilalao lafo vidy indrindra i Neymar da Silva Santos
Par Taratra sur 04/08/2017
Tsy tsaho intsony ny fifindran’i Neymar any amin’ny PSG. Efa vita ny fifanarahana rehetra : 222 tapitrisa euros ny takalon’ny fialany ao amin’ny FC Barcelone. Io ny voalaza fa vidin’ny fifindran-toerana lafo indrindra !
Any amin’ny PSG indray izao i Neymar, efa avy nanao veloma mandrampihaona ny namany rehetra ao amin’ny FC Barcelone izy. Ara-dalàna rahateo koa ny fizahana ara-pahasalamana natao taminy tao Porto, taorian’ny fitsangantsanganany tany Azia. 222 tapitrisa euros ny takalon’izany fifindran-toerana izany. Tsy mijanona hatreo ihany anefa ny vola miala amin’ny PSG ho an’ity Brezilianina ity. Tambin’izany ny hetra tsy maintsy arotsaka amin’ny fanjakana espaniola, tsy latsaky ny 40 % na 80 tapitrisa euros eo ho eo, araka ny fanazavan’ny mpahay lalàna sy toekarena momba ny fanatanjahantena, Thierry Granturco, tamin’ny gazety boky Le Figaro.
Ny miantoka ny fandoavana izany hetra izany, voalaza fa mbola ny PSG ihany miampy ny fandraisana an-tanana ny lafiny sosialy, tsy latsaky ny 100 tapitrisa euros. Tafakatra any amin’ny 400 tapitrisa euros izany ny fandraisana ity mpilalao ity, miampy ny karamany, 35 tapitrisa euros isan-taona tsy misy hanesorana na 65 tapitrisa euros feno. Amin’io karamany io indray, 37,5 tapitrisa euros ny hetra miditra amin’ny fanjakana frantsay, be lavitra noho ny an’ny mpilalao sasany.
Hifindra ihany koa i Mbappé
Tsy i Neymar ihany no malaza. Efa resabe ihany koa izao ny fialan’i Kylian Mbappé, vao 18 taona, mpilalao malaza ao amin’ny AS Monaco, Frantsa. Efa nanapa-kevitra ny tovolahy fa hifindra, saingy tsy mbola fantatra hoe aiza ? Ireo ekipa lehibe any Eoropa aloha, samy nilaza fa vonona ny handray azy avokoa. Fepetra napetrany : ho mpilalao tompon-toerana izy na aiza na aiza ny hidirany.
Ny Real Madrid, ohatra, efa nandrangaranga 180 tapitrisa euros. Ny ao amin’ny Manchester City indray, vonona ny hametraka azy anisan’ny mpilalao 11 voalohany. Raha lasa any izy, hiaraka hilalao amin’ireo namany tao amin’ny AS Monaco teo aloha ihany, toy an’i Bernardo Silva sy i Benjamin Mendy. Tombanan’ny maro, hatramin’izao, fa mety hidirany ny Manchester City. Maniry azy koa ny ao amin’ny PSG, hiara-dalana…amin’i Neymar. Saingy mbola sarotra izay noho ny PSG sy AS Monaco samy ekipa frantsay. Ekipa tsy latsa-danja mety handray an’i Mbappé ny FC Barcelone ho solon’i Neymar. Manana ny harotsaka rehetra ho amin’izany ity ekipa espaniola ity. Manome herinandro ny tovolahy hilazany izay tena fanapahan-keviny.